Philippe Coutinho Oo Shan Daqiiqadood Ku Burburiyey Manchester United, Guushii Rangnick Niyadda Gashaday Oo Isku-rogtay Iyo Lama Filaankii Ku Dhacay Red Devils - GOOL24.NET
Philippe Coutinho Oo Shan Daqiiqadood Ku Burburiyey Manchester United, Guushii Rangnick Niyadda Gashaday Oo Isku-rogtay Iyo Lama Filaankii Ku Dhacay Red Devils
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lama filaan iyo natiijo niyad-jab ah kala soo kulantay Aston Villa oo ay marti ugu ahayd Villa Park, taas oo ay ka xajisan kari weyday guul ay xilli hore gacanta ku dhigtay balse waqti dambe lagaga daba yimid.
Aston Villa ayay shan daqiiqadood oo kaliya ku qaadatay inay meesha kaga saarto laba gool oo ay Manchester United la timid labadii qaybood ee ciyaarta.
Manchester United ayaa 2-0 ku hoggaaminaysay ciyaarta daqiiqaddii 76aad waxaana labada gool ba u saxeexay Bruno Fernandes, hase yeeshee Philippe Coutinho oo kulankiisii ugu horreeyey u saftay Aston Villa iyo Jocob Ramsey ayaa min hal gool kaga dhaliyey shan daqiiqadood gudahood.
Goolhaye Martinez ayaa goolka koowaad ee Manchester United hadiyad ahaan u bixiyey daqiiqaddii lixaad ee bilowgii ciyaarta, markaas oo kubbad uu soo laaday Bruno Fernandes uu labada gacmood ku qabsaday, balse ka sii batay oo goolkiisa u weydaaratay.
Red Devils ayaa goolkan waqtiga hore ay dhalisay ugu dabbaal-degtay si weyn iyadoo uu waliba ka maqnaa xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo.
Aston Villa oo inta badan ciyaarta maamulaysay ayaan qaybta hore ka faa’iidaynin fursadihii ay heshay.
David de Gea ayaa sameeyey badbaadin cajiib ah, waxaanu kubbad gool caddaan ah loo qaatay uu ka diiday Buendia oo kubbad uu ka helay Digne ku qabtay madax-awood badan, taas oo uu goolhayaha reer Spain u babbac-dhigay.
Alex Telles iyo Mason Greenwood ayaa u dhowaaday inay hoggaanka usii dheereeyaan Manchester United ka hor intii aan loo bixin waqtiga nasashada, waxaana sii halis badnaa kubbad uu difaaca bidix ee reer Brazil ku garaacay goolhaye Martinez.
Qaladka uu sameeyey Martinez ayaa ku saxay badbaadinta Mason Greenwood uu kaga joojiyey goolka, halka David de Gea uu isaguna noqday xiddiga kooxdiisa markii uu kubbad aan la filayn uu ka qabtay Emiliano Buendia.
Jocob Ramsey iyo Lucas Dign ayaa khalkhaliyey difaaca Manchester United markii lagu soo noqday qaybta labaad, waxaanay min laba kubbadood oo wanaagsan la tageen xerada ganaaxa, waxaase ka liitay dhamaystirka oo uu Danny Ings uu qabsan waayey shaqadiisa.
Nasiib-darro ayaa ku dhacday da’yarka Manchester United ee Elanga daqiiqaddii 60aad markaas oo kubbad uu kusoo xeeladeeyey Cash uu dhinaca bidix kala soo galay xerada ganaaxa Aston Villa, isla markaana ku toogtay goolka waxayse kubaddu garab martay birta iyadoo waxyar u jirtay inay shabaqa taabato. Alla maxay fursad ahayd.
Manchester United ayaa sii dheeraysatay hoggaanka daqiiqaddii 67aad, waxaana gool labaad u dhaliyey bruno Fernandes oo dhamaystiray kubbad uu ka helay Fred.
Philippe Coutinho ayaa soo galay garoonka daqiiqaddii 68aad xilli ay Manchester United niyadda gashatay inay guuleysatay, waxaana uu kubbad-sameeyaha reer Brazil markiiba la wareegay khadka dhexe isaga oo difaacyahannada Man United na goysmo iyo il-dheeraan kubbad-dhiibis la socoto uu ku khalkhaliyey.
Chukwuemeka ayaa kubbada u dhiibay Philippe Coutinho daqiiqaddii 77aad, waxaana uu laacibka reer Brazil si qurux badan ugu sii gudbiyey Ramsey oo isaguna dhamaystiray, shabaqana u weydaariyey David de Gea.
Villa ayaa markan niyadda gashatay inay la iman karayso goolka barbarraha, waxaanay weerar aan joogi lahayn ku ekeeyeen xerada ganaaxa United oo la moodayay inay cabsi gashay markii uu goolku ka dhashay.
GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!! COUTINHO!!!!! Aston Villa ayaa keentay goolka barbarraha. Philippe Coutinho ayaa furtay xisaabtiisa gool-dhalinta Premier League, waxaana uu kooxdiisa Aston Villa u dhaliyey goolka barbarraha. Kubbad uu dhinac bidix ka keenay Buendia ayaa lugta u gashay Ramsey oo isaguna u gudbiyey Coutinho oo si xarrago leh u dhamaystiray.
Ciyaarta ayaa noqotay 2-2. Shan daqiiqadood oo kaliya ayaa u dhexeeyey labada gool ee Aston Villa ay dhalisay.
Coutinho ayaa mar kale tijaabiyey goolhaye De Gea, waxaana kubbad uu ku toogtay ay ku beegantay goolhayaha Spain oo isagoon dhibaatoonin qabsaday. Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay barbarro 2-2 ah.
Ralf Rangnick iyo xiddigaha Manchester United ayaa ka baxay garoonka iyaga oo niyad-jabsan isla markaana la yaabban sida guul gacantooda ku jirtay ay u xajisan waayeen shan daqiiqadood gudahood.
Natiijadan ayaa ka dhigan in Manchester United ay kaalinta toddobaad kaga jirto miiska kala-sarraynta Premier League waxaanay mar kale iska lumiyeen fursad ay ku iman lahaayeen kaalinta shanaad oo ay ka beddeli lahaayeen Arsenal iyagoo kasoo dul-boodaya Tottenham oo lixaad ku jirta.
Manchester United waxay haysataa 32 dhibcood, waxaanay shan dhibcood ka dambaysaa West Ham oo afraad fadhida, halka Manchester City oo hoggaanka haysana ay u jiraan 24 dhibcood.
Aston Villa ayaa iyaduna ku jirta kaalinta 13aad, waxaanay 9 dhibcood ka hoosaysaa Manchester United oo toddobaad fadhida.